Uyicwangcisa ngokuchanekileyo njani i-GPS yezixhobo ze-Android ze-Android | I-Androidsis
Kule tutorial ilandelayo ixhaswe ngevidiyo, Ndizokufundisa lungiselela ngokuchanekileyo i-GPS kwiziphelo zeSamsung ngenkqubo yokusebenza Android.
Into esiza kuyenza kwesi sifundo, kukuthi Lungiselela iGPS unokukhetha umqondiso onamandla kwaye uqhagamshele ngokukhawuleza; Ndivavanye ndayiqinisekisa ngenani elifanelekileyo leetheminali zosapho Isamsung Samsung, nangona ndicinga ukuba iyakusebenza kwezinye iitheminali, nokuba zikhona okanye akunjalo Samsung.
Into yokuqala esiza kuyenza kukukhuphela usetyenziso, ifayile ye Ukukhawuleza ukulungisa kunye I-GPS enomsindo, xa sele ukhutshelwe Zikopishe kwimemori khadi kwaye uzifake.
Into ebaluleke kakhulu endilibele ukuyithetha, yile Kuya kufuneka ube ngabasebenzisi bengcambu ukulungiselela ukwenza esi sifundo.
Nje ukuba ezi zicelo zibini zifakiwe siza kuya kuzo zibaleke ngendlela endibonisa ngayo i vidiyo kwi imifanekiso eqhotyoshelweyo.
1 Ukukhawuleza ukulungisa
2 I-GPS enomsindo
Sivula ifayile ye- Ukukhawuleza ukulungisa kwaye uqwalasele iserver elungele thina:
Siza kuvala Ukukhawuleza ukulungisa kwaye siya kuya I-GPS enomsindo.
Ukuseta GPS enomsindo ngokuchanekileyo kwaye ukhawulezise kwaye uphucule umqondiso IGPS Siza kwenza le nto siyibonayo kwimifanekiso eqhotyoshelweyo, yile nto ndiyichaza ngakumbi kwividiyo yesihloko:
Ngoku siyatshintsha Indawo yokuma yi MSBASED:
Sicofa iqhosha elingasemva kwaye ukhethe Cima idatha ye-GPS:
Ngoku sicofa apha Uvavanyo lwe-TTFF kwaye kwi- Qala kwaye silinde ukufaka umyalezo kwiisathelayithi ezikhoyo, ngaphandle kokuthetha ukuba oku kufuneka kwenziwe kwindawo ecacileyo, ngakumbi ngaphandle:
Silungile, sinokuyivala I-GPS enomsindo kwaye uvavanye ubumbeko ngeyethu Umkhangeli weGPS oyithandayoNgokuqinisekileyo uya kumangaliswa kukukhawuleza kunye namandla eGPS yakho.
Khuphela - Ukukhawuleza ukulungisa, I-GPS enomsindo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyicwangcisa njani ngokuchanekileyo i-GPS kwii-terminals ze-Samsung
Ewe, ndinomnyele we-2 one-ICS kwaye i-GPS isebenza ngokugqibeleleyo, ikwindawo ekhawulezayo kakhulu ebandayo kwaye eshushu kwaye engaze ilahlekelwe ngumqondiso esixekweni phakathi kwezakhiwo, kutheni uchukumisa nantoni na xa isebenza kakuhle?
Kucingelwa ukuba ukuba ihamba ngokugqibeleleyo akunyanzelekanga ukuba wenze nanye into, kodwa umzekelo kwi-Galaxy S oku kubalulekile.
Nceda ubhalise sitsho
Ayizukundivumela ndiyilungiselele kuba indixelela ukuba andinangcambu. Ngaba uyazi ukuba yintoni leyo?
Phendula kuNgxelo yeNgcaciso
kuthetha ukuba kuya kufuneka uyingcambu kuqala ifowuni yakho, kuba oku kukho izifundo kwibhlog
UTomas Martinez Silva sitsho
Kulunge kangakanani oko
Phendula kuTomas Martinez Silva
Ingelosi Hernandez sitsho
Umbuzo omnye: Ngaba ndingazikhupha kamva ii-apks zombini? Okanye kufuneka ndibashiye apho?
Phendula u-Angel Hernandez
Emva kokumisela unokuzicima ukuba uyafuna
Molo uFrancisco, kuqala ukubulela ngegalelo, okwesibini oku kuluncedo kwiMotorola? Okanye ngaba isebenza kuphela kwiisamsung? Konke okugqibelele
Yizame kuba ayizukukhathaza, ndiqinisekile ukuba i-fastfix inokukusebenzela, enye andazi ukuba mandikuxelele ntoni kwakhona.
Molweni okokuqala enkosi kakhulu ngegalelo endinalo i-b5 aquaris kwaye yonke into ihambe kakuhle, umbuzo wam ulandelayo. Ngaba i-GPS indifanele ngonaphakade, okanye xa kufuneka ndihambe, kufuneka ndiyenze yonke le nkqubo? Kuba ndenze okufanayo nangenye inkqubo efanayo kunye nangomhla olandelayo ukukhala.
Ukwenza kanye kufuneka wenze iqhinga.
Nge-18/10/2013 ngo-14: 37, «Disqus» wabhala:
Kwaye ungachaza njani ii-co__nes ezenza ezi nkqubo? Kungenxa yokuba iposti indixelela ukuba kufuneka ndifakele ii-APKs ezimbini kwi-URL emnyama nesolisayo ye-4Shared URL kwaye ndiqale ngokunqakraza kukhetho olungenakuqondakala alundiniki ukuzithemba okukhulu.
Molo mhlobo, iidilesi ezikrokrisayo othetha ngazo zezam, kwaye ezi zicelo zimbini ziye zavavanywa zasilela kum.
Le yindlela ekhuselekileyo kuba ekuphela kwento eyenziwa zeziapps kukufaka ikhowudi yofikelelo kulungelelwaniso lwakho lweGPS.
Ukuba unayo i-Samsung Galaxy S ene-stock Gingerbread rom, ungenza okufanayo ngokufaka ikhibhodi kwifowuni yakho ngokuchwetheza: * # 321147896580 # * uya kungena kwimenyu enye ngaphandle kokufaka nantoni na, ukuba loo khowudi ayisebenzi, zama oku: * # * # 1472365 # * # *
Ngokubhekisele kwi-Faster Fix, unayo kwiVenkile yokudlala.
Kwaye senza ntoni kwiselfowuni ngale misebenzi? Yintoni kanye kanye eyenziwa yiFasterFix, Oko kukuthi, yenzelwa ntoni le seva?
Kwelinye icala, ndicinga ukuba i-GPS enomsindo iguqula ubumbeko lwe-GPS, kodwa yeyiphi imo yokusebenza? Kwaye mbased?
Yiseva ekunika ukufikelela okungcono kunye okukhawulezayo kwidatha yesathelayithi yokukhuphela indawo yakho.
Into enomsindo yeGPS esele ndiyichazile ngaphambili.
Ngoku yiya kuGoogle ubuze ukuba benzani ngayo yonke idatha yakho, kuba bakufumene ngalo lonke ixesha kwaye bayazi ukuba uphi, ukuba bayakuhlola kwaye kukho iyelenqe nxamnye nawe….
Eli ligalelo iGPS engasebenzi kakuhle kulo, isimahla kwaye iqinisekisiwe yiseva, ukuba awuyithembi okanye awufuni kuyifaka sisigqibo sakho, ndizimisele ukunceda kuphela.
Iingxelo ze-Oscar sitsho
Mholo !! isifundo esihle !!
Ndinombuzo endikubuza wona, ngaba le nkqubo kufuneka yenziwe ngalo lonke ixesha siseta iselfowuni? Okanye, ngokuchaseneyo, sele ifakwe kwinkqubo ?!
Ndayivavanya kwi-ace Galaxy ye-samsung kwaye isebenza ngokugqibeleleyo !!
Iñigo Cuenca sitsho
Ndiyazi ukuba le post indala, kodwa ungandinceda.
Ndizikhuphele ezi fayile zimbini, ndafaka iFasterFix, kodwa xa ufaka iAngryGps, indixelela ukuba iyakuthatha indawo yedatha yenguqulo yangaphambili? kwaye xa igqibile "ukufaka" indixelela ukuba "Isicelo asifakwanga": S
Ndiya kulawulo lwesicelo kwaye ayizukundivumela ndicime okanye nantoni na, zonke iibhokisi ezingwevu ngaphandle kokukhetha kuzo kwaye nesicelo sinobunzima be-0Kb
Phendula uIñigo Cuenca
Vula ikhibhodi kwifowuni yakho kwaye ucofe le khowudi:
I-gps enomsindo iya kuvela, ethi kwiinguqulelo zejinja ziyinxalenye yegalaksi s.
Nge-19/09/2012 ngo-10: 17, «Disqus» wabhala:
Ikhowudi epheleleyo injalo? Ngayo yonke i-asterisk? kuba xa ndibeka i-asterisk yokugqibela amanani asesikrinini ayanyamalala kwaye ukuba ndiyayibiza, iya kwilog yokufowuna: S
Ukuba ayisebenzi kuwe, zama le:
Ngendlela, yeyiphi ingxelo ye-Android onayo?
Akukho nto, nokuba inye. Xa ndibeka iphedi ekugqibeleni, amanani ayanyamalala ...
Iselfowuni yiGPS S GT-I9000
Kwaye kwelinye icala, ndicinga ukuba ndijijile, kuba "ndikhuphe" i-angrygps ezivela kwi-Titanium Backup, kwaye ngoku ayibonakali naphi na, kwaye ayindivumeli ndiyifake kwi-APK nokuba .. Ukuba ndilidada. Kungenxa yoko le nto kukho amathandabuzo amaninzi ngezixhobo zamagumbi ...
Ukuba ekugqibeleni ubeke i-CM10 okhankanye ngayo ngenye imini, yifake kwi-sdcard kwaye wenze yonke inkqubo ...
Kuqala kuya kufuneka ufake ukubuyiswa okulungisiweyo kukho iposti yebhlog malunga nayo
Nge-19/09/2012 ngo-16: 18, «Disqus» wabhala:
Ndicinga ukuba sele ndiyifakile. Ngapha koko ndicinga ukuba ndingafikelela ngqo kumphathi weRom.
Isikimu konke oku kuthunyelwe malunga ne-odin kunye nabanye yinto endiyenzileyo ngemihla yakhe kwaye ukusukela ngoko andikhange ndiyihlaziye: S
Ukuba akunjalo, ndingazi njani ukuba ndinayo i-Recorvery eguqulweyo?
Khuphela .apk kwi / inkqubo / ifolda yeapp kwaye emva koko ungayifaka
Ndiyabulela kakhulu nge-tuto andazi ukuba zingaphi iingcambu kwaye kuvavanywa kwaye andinanto i-s9000 kwaye ayikhange isebenzele mna nasezindaweni ezivulekileyo kodwa undisombululele yona enkosi
Ndonwabe kakhulu mhlobo
Ngo-Okthobha 4, 2012 23:42 AM, Disqus wabhala:
Molo uFrancisco, enkosi kakhulu ngomhlohli, bendizakuphambana kwaye bendicinga ukuba kufuneka ndenze into enjalo, into endiyifumeneyo kwaye ndicinga ukuba izakwenzeka kubantu abaninzi kukuba kuqala bendilinde ixesha elifutshane kakhulu ukubamba iisathelayithi kwaye ndicinga ukuba kungcono ukuba nomonde kwaye ulinde imizuzu emininzi ukuthatha uninzi kunye nomqondiso ongcono apho ubeka khona i-dbhz, ukuba ufuna ukuyicacisa kwisifundo, enkosi kakhulu kwakhona, imibuliso
kulungile ayisebenzi ... uyazi ukuba iyasebenza kunye negumbi 4.1.1 endilibeke nje kwi-I9000 yam, okanye ukuba inokuba yeyangaphambili ...? Ndiyifundile inokuba kungenxa yoko kwaye andisazi ukuba kutheni inganxibelelani nangayiphi na indlela ...
UJavi mateos sitsho
Enkosi kakhulu, isantya sonxibelelwano siphucule kakhulu, enkosi
Phendula uJavi Mateos
Molo uFrancisco, ndine-s9000 kwaye i-gps yam yenza kakubi kakhulu, ndizamile ukufaka i-gps enomsindo kodwa andikwazi ukuyilayisha, ayibonakali kumdlalo kaGoogle, ndinayo ingqokelela yeCreedROM_v11, ingaba yiyo loo nto?
Le fowuni yiGTI9000
UJoe, ithamsanqa liphi, ndibanjwa ziisathelayithi kodwa xa ndiphuma ndikhwela
U-Endomondo okanye iWikiloc uyandiphazamisa… ndenza indlela yebhayisekile engama-48km kwaye uMnu.
U-Endomondo undixelela: i-817km, i-avareji yesantya i-188km / h, yiza ungandijiyi!
ihenyukazi! nasiphi na isisombululo ??
UPablo Gonzalez sitsho
Molo Oscar, ndinengxaki efanayo ne-Beast Rom, i-GPS ilungile ngaphandle kwaxa ndiphuma ngebhayisekile. Iapps zindiphawula umgama omdaka kunye nesantya, ngaba ukwazile ukuyilungisa? Enkosi kwaye konke ku.
Phendula Pablo Gonzalez
UAlberto Blanco Gonzalez obambe umfanekiso sitsho
Sele ndifundile ukuba emva kokusebenzisa ii -apps, singazikhipha, ngaba asizukukhupha iingcambu?
Phendula u-Alberto Blanco Gonzalez
Ngomhla we-bn uthi kufuneka ube une-akhawunti yengcambu njengoko ndenzayo ukuyivula, enkosi
Ndingathanda ukuyivavanya kwi-Galaxy S yam, kodwa ingcambu iyafuneka ngokukhawuleza. Ndine-2.3.6 yenguqulo ye-Samsung eyakha i-XWJW5 kwaye andazi ukuba ndingayisusa njani.
Nantsi indlela yokwenza: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=26407515#post26407515
Ndiyifumana phi i-angrygps engatsiba kwivenkile yokudlala
Zombini ezi fayile ziqhotyoshelwe kwisithuba eso.
Nge-16/04/2013 ngo-04: 32, «Disqus» wabhala:
UCathy graupera sitsho
Sawubona uFrancisco: Ndisandula ukuthenga iMiomundo i9377 kwaye andikwazi ukumisela i-GPS. Ngaba ungandinceda kuqwalaselo kwaye undixelele ukuba ndingayifaka njani? Ukubulisa kunye nombulelo
Phendula uCathy Graupera
Tuchy Mpz sitsho
UYAZI UKUBA NDIFUMANE ISAMSUNG GALAXY S2 KODWA IGPS AYIDIBANISI, NDIJONGA UMNQOPHISO NGONAPHAKADE ... ndizakuzama ngale khokelo ukubona ukuba ndingafezekisa na into
Phendula Tuchy Mpz
Ndikhonze ndikwazile ukunxibelelana enkosi kakhulu !!!
Molo, ndingayitshintsha i-GPS ye-s3 yam yendawo okanye imitha yomgama njengoko ndifuna nokuba ziimitha ezili-100 ukusuka kwindawo yam
UAlfa Omega sitsho
Ndimtsha kule nto kwaye andifumani ndlela yokungcothula iselfowuni yam
ICUBOT GT89 ene-android 4.2.1 ukuze ikwazi ukulungisa iisathelayithi. Ungandinceda?
Shit ngokuthenga isiTshayina ha ha ha
Nasiphi na isisombululo sabasebenzisi abangengcambu? Enkosi.
Iimpawu zeGrossito sitsho
Molo kusasa ekuseni, ndinengxaki ngegps yemodeli yam ye-s2 i9100 andro 4.1.2 i-GPS iyasebenza kodwa indawo ondinika yona yi-28 km ukusuka apho ikhoyo ifowuni ...
Phendula iGrossito Vents
Zama ukuhlengahlengisa ngamanyathelo okufundisa
oscar llanos sitsho
Molo, molweni ekuseni, igama lam ndinguOscar waseBotota, eColombia.Ndingu-newbie kule nto kwaye khange ndikwazi ukuba ngumsebenzisi wengcambu.Ndifuna ngamandla amandla e-GPS yethebhulethi yam yesamsung ye-Galaxy tab.2. ngentsebenziswano yakho.
Phendula kwi-oscar llanos
HENRY ARMANDO RUIZ UTSHILE sitsho
Phendula HENRY ARMANDO RUIZ AHUMADA
I-samsung galaxy ace yam ibonisa ukuba ndikwindawo engalunganga kwaye andazi ukuba ndingayiqwalasela njani ukuze nditsho indawo efanelekileyo apho ndikhoyo
Ndifuna ukuvavanya ukhetho lwakho ngeGPS SII yam emva kokuhlaziya i-Android ukuya kwi-4.1.2 iGPS yam iyekile ukusebenza.
Ngaba ucinga ukuba isisombululo sakho siza kusebenza kule ngxaki?
Ngapha koko, ayizukundivumela ndikhuphele ezi fayile zimbini uzikhankanyileyo ngokukhawuleza, i-GPS enomsindo.
Ingqondi egqibeleleyo! Enkosi kakhulu, kuvavanywa nge-APS 9920 iTshayina Android 4.1.1 iArgentina.
Ndiyazi ukuba iposti indala kakhulu kodwa bendihleli ndingenayo i-GPS iinyanga. Ndihlala ndizama le ndlela (mhlawumbi ndizamile amaxesha angama-20) kwaye ngoku, emva kokutshintsha iROM kwiRC4 ndizamile kwakhona kwaye akukho nto. Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi incede kancinci kodwa iinguqu azibonakali ngathi zigcinekile. Ezi ngxaki ndizifumana ndizifumana
-Ukulungiswa ngokukhawuleza kuhlala kuphelela ekubuyeni "eAsia". Ndiyisombulula ngokuphuma ngeqhosha lokuQala, elindivumela ukuba ndiqhubeke ndinomsindo rhoqo.
-Kudla ngokuthatha ixesha elide ukufumana zonke iisathelayithi. Xa kuthathe ixesha elifutshane (ngamanye amaxesha ndiye ndayeka ukukhangela ndahamba) kubonakala ngathi kuyasebenza kodwa bekusoloko kuyimimangaliso. Ngexesha elifutshane, nasiphi na isicelo sikhangela iGPS ngokungenammiselo.
Andazi, ukuba umntu angandiphendula ... Ndiyaqonda ukuba ekugqibeleni phantse yonke i-Galaxy SI inayo le ngxaki kwaye kufuneka ubhenele ekusebenziseni i-eriyali kodwa abahlobo bam abanesiphelo esinye (abangakhanyisanga) abanayo ingxaki leyo
Ami kwenzeka into efanayo kum kwigalaxi s1 kwaye ibindisebenzela iinyanga ngegumbi lakutsha nje elingu-4.2.1 no-4.2.2, zama ukwenza ukukhanya okucocekileyo nokufaka igumbi elitsha
Kulungile enkosi. I-RC4 sele ingu-4.2.2, ekuphela kwento endinokuyishiya kukuyikhanyisa icocekile kodwa ndiyifakile le kwaye phakathi kwexesha endithatha ngalo kwaye ndihlala ndisenza ikaka, okwangoku andizukuyikhanyisa kwakhona .
Enkosi kakhulu, ndonwabile usuku lwam: 3
Ndithenge iklone yes4, emva kokwenza oku ndavula iimephu zikaGoogle, indifumana ngokugqibeleleyo kodwa ayihambi, iyaqhubeka «ikhangela i-gps ...»
UMiguel Angel Reyes sitsho
kuhle kakhulu enkosi 🙂
Phendula uMiguel Angel Reyes
Ndine-galaxy s3 kwaye ukusuka kumzuzu omnye ukuya kwenye i-GPS iyekile ukusebenza, ndizamile ezi zicelo zimbini kodwa andifumananga ziphumo, ayenzi luvavanyo; kwakhona p,
Molo.Ndicela undincede ndimise i-gps phakathi kwesamsun ezimbini.Ndiyabulela
Igalelo elilula kakhulu, ndinalo unyaka kwaye ukusukela oko ndikunye no-4.1.2 andizange ndikwazi ukudibanisa i-GPS, ngaphandle kokusebenzisa i-wifi ngeemephu zikaGoogle, andiyiniki ibhola eninzi kodwa kufana nokuba ibingazikhathazi ndinee-gps zeapps ezinje nge-strava, Namhlanje ndiyigxile ndaza ndalandela oku ngokusebenzisa ezi zicelo zimbini kwaye zalungiswa njengeNyakatho Melika, ngoku apha e-Argentina isebenza ngokugqibeleleyo. Ndiyabulela kakhulu
Emva kokuchitha uburhalarhume obuninzi ngeegps zomnyele oselula ndicinga ukuba indlela yakho ibhetele kakhulu, ngomso ndiza kuyizama kunye nombaleki xa ndibaleka i-xD (ukusukela izolo bendineminyaka engama-6k kwaye ndiphawula iimitha ezingama-300 kanye pu….) I-xD
enkosi evela eChile
Consuelo Hermosillan sitsho
Mholo!! inqaku linomdla! Ndine-S2, ndikhuphele eziapp zimbini, kodwa iFasterFix ayisebenzi kum, ndiyivula kwaye isikrini simnyama. Ngaba inxenye ye-AgryGPS inokwenziwa kuphela? Kwaye ukuba akunjalo, ngaba ikhona enye indlela kwiFasterFix?
Phendula u-Consuelo Hermosillan
Ndifumana iqhosha elingwevu nge-EPO (Khuphela), ndiyinika kwaye ayenzi nto.
Ngayiphi na imeko, andifumani nantoni na ekubeni ndikwazi ukwenza i «YENZA I-EPO» Njengakumfanekiso ongaphambili wesicatshulwa
Ndilangazelela, kuba iGPS yam ayisebenzi kwaphela. I-6582 isandula kuthengwa
Molo, zama le app yeFasterGPS ukuba ungayikhuphela kwivenkile yokudlala, iyenza okufanayo.
Buenas tardes. Njengoko ndifunda le ndlela isebenza s2 nayo. Ityala lam lilandelayo. Iigps zandisebenzela kakhulu naphina. Emva koko ndatshintsha iselfowuni yam kwaye yaqala ukusilela kum kwindawo endihlala kuyo eCarabobo, eVenezuela. Kodwa into engaqhelekanga kukuba xa ushiya loo meko, iyasebenza kwakhona njengangaphambili! Kwaye xa ndingena kwakhona kurhulumente iyasilela. Ngale nkqubo, ngaba inokulungiswa? Ndisebenzisa iGPS kakhulu kuba ndisebenza ndityhutyha ilizwe liphela. Enkosi!!
Molo kwakhona, kwithuba elidlulileyo ndikhuphele ii -apps kwaye ndenza le nto uyichazayo apha, kodwa xa ndisiya kutshintsha indawo yoMzantsi Merika, iyandixelela, «UKUYEKA, zama kwakhona kamva». kwaye ndingayenza amaxesha angama-500 nakowuphi na ummandla kwaye indixelela into enye. Ndenza ntoni xa kunjalo? Indoda enomsindo indifumana kwezinye iisathelayithi kodwa ayindiniki zilungelelaniso ... ndingenza ntoni ngayo? ngendlela, izolo ndilibele ukuphawula ukuba ndine-kitkat 4.4.4 evela kwi-cyanogenmod 11. Enkosi kwaye ndiyathemba ukuba umntu othile angandiphendula. Imibuliso.
Sawubona uFrancisco, ndineengxaki nge-GPS yam yile nto ndicinga ngayo, xa ndiqala ukusebenzisa i-S Health le app iyayeka. Kwaye ukuba ndabelana ngendawo yam X i-wathsapp nayo iyamisa isicelo. Ndincede endikwenzayo
Iposti enkulu, ndizamile iindlela ezahlukeneyo zokulungisa i-GPS kwaye ndaphumelela kuphela kule datha. Ukulungiswa okukhawulezayo akusebenzi ngokufanelekileyo kwezinye iimeko, ukhetho lukhawuleza i-gps. Kwaye i-gps enomsindo ivala ngokungalindelekanga, iyaqhubeka nokwenza umsebenzi. Iigps zam ngoku zihamba ngokudubula komdlalo. Enkosi
Molo iigps zam azisebenzi ndine-Samsung s5 ndiyayibulela ingqwalaselo yakho